Iphupha malunga nokulahla ▷ ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Indawo yokulahla inkunkuma, eyaziwa njengendawo yokulahla inkunkuma emazantsi eJamani, yenziwa ngentlama kwaye ihlala iphoswa emanzini anetyuwa. Ubukhulu becala bubume obungqongqo, kunye nebhola yenhlama ekuthiwa yi-napkin. Kuba apha intlama ifumana imilo emide.
Inhlama yokulahla inokuba nezinto ezahlukeneyo. Kukho, umzekelo, amadombolo enziwe ngeetapile, amadombolo ezonka, abandakanya iibhontsi okanye amadombolo esemolina. Ukuba inhlama inesixa esikhulu se-quark, ibizwa ngokuba ngamadombolo. Inhlama yokulahla inemigubo emininzi kunye nemvubelo inokusetyenziselwa ii-noodles okanye i-dumplings.
Ukuba inhlama inenyama eluhlaza, ibizwa ngokuba yibhola yenhlama endaweni yebhola yenhlama. Khawufane ucinge nge "Königsberger Klopse" emnandi kunye nesoda yayo njengomzekelo.
Amadombolo anokuhlulwa-hlulwa abe ziinguqulelo ezimnandi nezinencasa. Nangona kunjalo, ikwaxhomekeka kwincasa yomntu otyayo, kuba, umzekelo, ii-noodles ezinomphunga zinokutyiwa nesuphu okanye ne-vanilla isosi kwindawo yedessert.
I-Meatballs yindawo yokutya esecaleni, ngakumbi eJamani. Kodwa zinokusetyenziswa njengesitya esiphambili okanye iswiti okanye njengesincedisi sesuphu.
1 Uphawu lwephupha «ukulahla» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukulahla» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukulahla» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukulahla» - ukutolikwa ngokubanzi
Uhlalutyo ngokubanzi lwamaphupha lubona kwisimboli yamaphupha "ukulahla" isimboli ye Ingeniso elungileyo en el mundo yomlindo. Ukongeza, umntu ophuphayo uhlala enakekelwa kakuhle kwaye akazukuhlupheka nangaluphi na uhlobo lobunzima.
Nabani na owenza inhlama yebhola yenyama ephupheni lakhe uya kuyifumana Imizamo ukuza kubomi bokuvuka. Ukuba uphupha ukupheka isidlo ngeebhola zenyama njengesitya esecaleni, uya kuva intlebendwane. Ukugcoba ngeebhola zenyama kunye ne-gravy kunokuzisa imihla emnandi njengephupha. Iibhola zenyama enesosi yomdiliya usenokuba sisilumkiso ngokuchasene nokungakhathali okugqithisileyo.
Ukuba umphuphi utya iibhola zenyama elele, zihlala zimfanele ixesha elimnandi kakuhle ngaphambili. Iibhola zenyama ezixineneyo, mhlawumbi neziqhamo, zihlala zixela ukumangaliswa. Nokuba ezi ziya kuba zilungile okanye zingalunganga zihlala zingeniswa kwiimvakalelo ephupheni.
Idombolo yeetapile njengephupha ikakhulu zi uphawu oluhle kumntu oleleyo kwaye uthembisa ukukhula okumnandi ebomini bokuvuka. Izindwangu zezonka ephupheni zingabonisa ukuba ufuna ukwanelisa iimfuno zakho. Ukubona kweedombolo zesibindi ngexesha lokulala kuhlala kubonisa impilo entle kunye namandla abalulekileyo.
Iibhola zenyama zikaQuark, ezicingelwa njengephupha, zilumkisa ngokubanzi ngeembambano nobunzima kwilizwe lokwenyani. Kuya kufuneka uzame ukungabacaphukisi abanye abantu. Ukuba ubona amadombolo egwele kwiphupha lakho, mhlawumbi uya kuthi ngempumelelo ukuba. Iibhola zentlanzi zinokubhekisa kutshintsho olumnandi ephupheni, ngelixa ibhola yenyama njengophawu lwephupha ibonisa umzabalazo wamandla walo mntu kuthethwa ngaye.
Uphawu lwephupha «ukulahla» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lohlalutyo lwamaphupha, iqhuma ephupheni luphawu lomnqweno wephupha lokomoya okanye ukutya kokomoya ijongiwe. Ngokwesiqhelo ufuna ukwandisa ulwazi lwakho kwihlabathi elivukayo okanye wabelane ngeziphumo zakho nabanye ukuze ufumane ukuqonda okutsha.
Ngaphaya koko, ukutolikwa kwengqondo yephupha kutolika uphawu lwephupha "ukulahla" kunoko ngengqumbo okanye iqhuma. Umzekelo, iqhekeza legazi elinokutshicelwa ephupheni linokubetha into Okokugqibela bonisa into ekufuneka yenziwe. Ingqumba yodongwe ngexesha lokulala ingabonisa ukuba umntu uzama ukunyanga kwinqanaba lokomoya.
Ingceba yelitye ingasetyenziswa njengomfanekiso wephupha. Emhlabeni Umntu oleleyo uya kubonisa into eza kukunceda uphumelele. Iziqwenga zesichotho ephupheni zihlala zilumkisa umntu ekuthethwa ngaye ukuba azive eshushu kwihlabathi elivukayo.
Ukuba umphuphi ngokoqobo "unesigaqa emqaleni wakhe" ngelixa elele, unokuba kwi ukungalingani kwangaphakathi. Kuya kufuneka usebenze kuloo nto kwinqanaba lokuqonda. Nabani na ogrogrisa ukufuthanisela inxenye yephupha lakhe kufuneka ajongane noloyiko lwabo. Kungenxa yokuba oku kubonakala kuthintela ukuqhubeka kophuhliso. Ukuba isiqwenga sikhutshwe emlonyeni womntu oleleyo, siphenjelelwa ikakhulu ziimvakalelo zakhe kwilizwe lokwenyani.
Uphawu lwephupha «ukulahla» - ukutolika kokomoya
Ubume bokulahla ephupheni, ukukhumbuza ibhola, kunokuba, kuxhomekeke kutoliko lephupha lokomoya, kwiminqweno yalowo uleleyo ngokuzaliseka okanye ngokulandelelana. imfezeko yokomoya Iingoma.